विवाह—भिन्नताहरूको सामना गर्नुहोस्
लेखको भाषा अङ्ग्रेजी अफ्रिकान्स अरबी अल्बेनियन आम्हारिक आर्मेनियन इटालियन इन्डोनिसियन इलोको ईवी उम्बुन्डु एस्टोनियन कन्नडा किकाओन्डे किकोंगो किन्यारवान्डा किरून्डी किर्गिज कोरियन क्रोएसियन क्वेचा (कुज्को) क्षोसा गुजराती ग्रीक चिचेवा चिटुम्बुका चिटोंगा चिनियाँ म्यान्डरिन (परम्परागत) चिनियाँ म्यान्डरिन (सरल) चेक जर्जियन जर्मन जापानी जुलू टगालोग टर्किश टिग्रिन्या टेटन डिली डच डेनिश तामिल ताहिटी तेलगु तोक पिसिन त्वी त्सोंगा थाई नर्वेली नेपाली पंजाबी पोर्चुगिज पोलिश फिजियन फिनिश फ्रान्सेली बंगाली बिस्लामा बुल्गेरियन भियतनामिज मराठी मल्यालम मालागासी म्यानमार म्यासडोनियन युक्रेनियन रूसी रोमानियन लाट्भियन लिंगाला लिथुआनियन लुभेल वारे-वारे सर्बियन सर्बियन (रोमन) सामोअन सिंहला सिबेम्बा सिलोजी सेत्स्वाना सेपेडी सेबूआनो सेसोथो (लेसोथो) स्पेनिश स्लोभाक स्लोभेनियन स्वाहिली स्वाहिली (कंगो) स्विडिस हंगेरियन हिन्दी हिब्रू हिलिगेनोन
परिवारका लागि | विवाह
भिन्नताहरूको सामना गर्नुहोस्
तपाईंलाई खेलकुद मन पर्छ तर तपाईंको जीवनसाथीलाई पढ्न मन पर्छ। तपाईं एकदमै व्यवस्थित र कामकुरा गर्न सिपालु हुनुहुन्छ तर तपाईंको जीवनसाथी व्यवस्थित हुनुहुन्न। तपाईंलाई मानिसहरूसित समय बिताउन मन पर्छ तर तपाईंको जीवनसाथीलाई होहल्ला नभएको शान्त ठाउँ मन पर्छ।
तपाईं भन्नुहुन्छ, ‘हाम्रो केही पनि मिल्दैन। विवाहअघि नै यो कुरा किन याद गरेनौं?’
सायद त्यतिबेला पनि तपाईंले यो कुरा केही हदसम्म याद गर्नुभएको थियो। तर त्यतिबेला तपाईंले त्यसलाई त्यति महत्त्व दिनुभएन। वास्तवमा विवाहपछि पनि तपाईंले त्यस्तै गर्नुपर्ने हो। यस लेखले तपाईंलाई त्यसै गर्न मदत गर्नेछ। सबैभन्दा पहिला, पति-पत्नीबीच भिन्नताजस्तो देखिने केही तथ्य विचार गरौं।
केही भिन्नता गम्भीर खालका हुन्छन्‌। विवाहअघि भेटघाट गर्नुको एउटा मुख्य उद्देश्य के-कस्ता कुराहरू आपसमा मेल खान्छन्‌ भनेर पक्का गर्नु हो। त्यसैले भेटघाटको क्रममा कुनै गम्भीर खालको भिन्नता देखियो भने थुप्रै जोडीले सम्बन्ध अघि बढाउनुको सट्टा त्यहीं टुङ्ग्याउँछन्‌। तर त्यति गम्भीर खालको भिन्नता होइन भने नि?
दुई जनाको सबै कुरा मिल्छ भन्ने छैन। त्यसैले तल दिइएका क्षेत्रहरूमा जीवनसाथीबीच केही कुरा नमिल्नु नौलो होइन:
रुचि। अनिता * नाम गरेकी पत्नी यसो भन्छिन्‌, “मलाई बाहिर घुमफिर गर्न जाऊँ जस्तो कहिल्यै लागेन। तर मेरो श्रीमान्‌लाई हिमाल चढ्न अनि हप्तौं लगाएर ट्रेकिङ जान पहिल्यैदेखि मन पर्थ्यो।”
आनीबानी। विराज नाम गरेका पति यसो भन्छन्‌, “मेरी श्रीमती राती जति ढिलो सुते पनि बिहान पाँचै बजे उठ्छिन्‌। तर मलाईचाहिं सात-आठ घण्टा सुतेन भने मुड नै ठीक हुँदैन।”
स्वभाव। तपाईं शान्त स्वभावको हुनुहोला अनि तपाईंको जीवनसाथीलाई चाहिं धेरै कुरा गर्न मन पर्छ होला। दिनेश नाम गरेका पति भन्छन्‌, “मेरो परिवारमा व्यक्तिगत समस्याहरूबारे खुलेर कुराकानी गरिंदैनक्थ्यो। तर मेरी श्रीमतीको परिवारमा भने सबै कुरा एकदमै खुलस्त हुन्थ्यो।”
भिन्नता हुनु राम्रै हो। मीरा नाम गरेकी पत्नी भन्छिन्‌, “कामकुरा गर्ने मेरो तरिका पनि राम्रो हुन सक्छ तर यो मात्रै सही तरिका भने होइन।”
साथ दिनुहोस्। अजय नाम गरेका पति भन्छन्‌, “मेरी श्रीमतीलाई खेलकुदमा थोपो चासो छैन। तर म खेल्न जाँदा तिनी पनि थुप्रै पटक मसँगै आएकी छिन्‌ र मलाई हौस्याएकी छिन्‌। मेरी श्रीमतीलाई चाहिं कला सङ्ग्रहालय मन पर्छ। त्यसैले म पनि तिनीसितै सङ्ग्रहालय जान्छु र तिनले जाऊँ नभनेसम्म तिनीसितै समय बिताउँछु। तिनलाई चित्र मन पर्ने भएकोले म पनि त्यसप्रति रुचि देखाउन सक्दो गर्छु।”—बाइबल सिद्धान्त: १ कोरिन्थी १०:२४.
खुला मनले सोच्नुहोस्। तपाईंको विचार र तपाईंको जीवनसाथीको विचार मेल खाएन भन्दैमा तिनको विचार गलत हुन्छ भन्ने छैन। अशोक नाम गरेका पतिले यस्तै पाठ सिके। तिनी भन्छन्‌, “क बिन्दुदेखि ख बिन्दुसम्म जाने सबैभन्दा छोटो बाटो सिधा धर्सो हो र अरू सबै बाटो राम्रो छैन जस्तो मलाई लाग्क्थ्यो। तर विवाहपछि मैले क बिन्दुदेखि ख बिन्दुसम्म जाने धेरै बाटो छ भनेर बुझ्न सकें। अनि हरेक बाटो नै आफ्नो हिसाबले सही हुँदो रहेछ।”—बाइबल सिद्धान्त: १ पत्रुस ५:५.
व्यावहारिक हुनुहोस्। मिल्दोजुल्दो हुनुको अर्थ ठ्याक्कै उस्तै हुनु होइन। त्यसैले केही भिन्नता देखियो भन्दैमा व्यर्थै बिहे गरेछु भनी नसोच्नुहोस्। एउटा किताब * यसो भन्छ, “धेरै जनाले ‘म प्रेममा अन्धो भएको थिएँ’ भन्ने गर्छन्‌। तर तपाईंहरूले हरेक दिन खुसीसाथ जीवन बिताइरहनुभएको कुराबाट जस्तोसुकै भिन्नता भए तापनि तपाईंहरू एकअर्कालाई प्रेम गर्न सक्नुहुन्छ भनेर देखिन्छ।” ‘यदि कसैसित केही गुनासो छ भने एक-अर्कालाई सहिरहन’ कोसिस गर्नुहोस्।—कलस्सी ३:१३.
यसो गरे कसो होला? तपाईंलाई आफ्नो जीवनसाथीको के कुरा मन पर्छ अनि तपाईंहरू दुईबीच के कुरा मिल्छजस्तो लाग्छ, लेख्नुहोस्। त्यसपछि तपाईंहरूबीच नमिल्ने कुराहरू लेख्नुहोस्। सायद नमिल्ने कुराहरू तपाईंले सोचेजस्तो गम्भीर खालको रहेनछ भनेर बुझ्नुहुनेछ। त्यो सूचीले तपाईंलाई जीवनसाथीको के-कस्तो कुरा सहन सकिन्छ र कसरी तिनलाई साथ दिन सकिन्छ भनेर बुझ्न पनि मदत गर्नेछ। किरण नाम गरेका पति भन्छन्‌, “श्रीमतीले मेरो कुरा स्वीकार्दा म त्यसको मोल गर्छु अनि मैले तिनको कुरा स्वीकार्दा तिनी पनि मेरो मोल गर्छिन्‌ भनेर मलाई थाह छ। कहिलेकाहीं मैले केही त्याग गर्नुपर्ला तर तिनी खुसी भएको देख्दा मलाई खुसी लाग्छ।”—बाइबल सिद्धान्त: फिलिप्पी ४:५. (g15-E 12)
^ अनु. 10 यस लेखमा केही नाम परिवर्तन गरिएका छन्‌।
^ अनु. 17 The Case Against Divorce
“हरेकले आफ्नो होइन तर अर्को मानिसको फाइदा खोज्ने गरोस्।”—१ कोरिन्थी १०:२४.
“एक-अर्कासित व्यवहार गर्दा तिमीहरू सबै विनम्र होओ।”—१ पत्रुस ५:५.
“तिमीहरूको व्यावहारिकता सबै मानिसहरूलाई थाह होस्।”—फिलिप्पी ४:५.
चार्ली र रामोना
“यदि तपाईंलाई ‘हाम्रो जोडी मिल्दैन’ जस्तो लाग्छ भने तपाईं त्यो कुरा प्रमाणित गर्ने धुनमा मात्र लागिरहनुहुन्छ। यसको सट्टा दुई जना मिलेर काम गर्ने प्रयास गर्नुहोस् र आफ्नो जोडीमा भएको भिन्नतालाई विषको रूपमा होइन, मसलाको रूपमा हेर्नुहोस्। बाधाविघ्न आयो भन्दैमा सम्बन्ध तोड्नै पर्छ भन्ने छैन।”
बेन्जामिन र चेल्सी
“कोही-कोही यसो भन्छन्‌, ‘सङ्गीतको विषयमा होस् वा फिल्म हेर्ने विषयमा, हामी दुई जनाको कुरै मिल्दैन।’ यस्तो भिन्नता हामीमा थुप्रै छ। तर यस्तो ‘भिन्नताको’ कारण आपसी सम्बन्ध तोडेको भए दुवै जना सँगै हुँदा पाएको आनन्द अनुभव गर्न सक्ने थिएनौं अनि दुवै जनालाई रमाइलो लाग्ने कामहरू पनि गर्न सक्ने थिएनौं।”
वैवाहिक जीवन पारिवारिक तथा वैवाहिक जीवन
समस्या कसरी सुल्झाउने?
समस्या सुल्झाउन सही तरिका अपनाउनुभयो भने दाम्पत्य जीवन सुखी हुनेछ।
मेलमिलाप गर्नुहोस्, तर कसरी?
चार वटा कदमले तपाईं र तपाईंको जीवनसाथीलाई झगडा गर्नुको सट्टा सँगै मिलेर समस्याको समाधान गर्न मदत गर्न सक्छ।
छोराछोरीलाई नम्र हुन सिकाउनुहोस्
मनोरञ्जनको लागि खतरा मोल्नु उचित हो?
छोराछोरीहरू छुट्टै बस्न थालेपछि
घरायसी कामको महत्त्व